Ungaluvuselela njani kwakhona ukhenketho
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Iindaba eziziiNdaba zokuHamba » Ungaluvuselela njani kwakhona ukhenketho
Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Education • Icandelo lokungenisa izihambi • iindaba • Shopping • Tourism • uthutho • Iimfihlo zohambo • komzila Ngoku • Iindaba zase-USA ezaphulayo • Iindaba ezahlukeneyo
Ngamandla okwenyani okufumana iyeza sinokuyiqala le nto malunga nokhenketho emva kobhubhane. Emva kokuba uCovid-19 esiba sisiqendu esibuhlungu kwimbali yeenkokheli zeshishini lokhenketho kuya kufuneka zifumane iindlela zokwakha ngokutsha ishishini kunye nokunyusa inani labantu abahambahambayo kwaye baphinde bafumane inzuzo. Ithemba elinqwenelekayo nolunqwenelekayo lowama-2021 linokuba lihle kakhulu, kodwa ishishini lokhenketho kufuneka likulumkele ukungaphindi lisilele ilizwe lokhenketho langaphambi kukaCovid-19 kwaye liphinde lenze umhlaba wokhenketho olugqithisileyo. Kufanelekile kuthi sonke ukuba sikhumbule ukuba esiNgesini sithola igama elithi "ukuhamba" lisuka kwigama lesiFrentshi elithi "travail" kwaye amaxesha amaninzi ukuhamba kuye kwaba ngumsebenzi.
Ukuhamba ngexesha le-Covid-19 akukho lula, kodwa kufanele ukuba sikhumbule ukuba nakwi-pre-Covid 19 ukuhamba emhlabeni kwakusoloko kunzima. Unyango lolwaphulo-mthetho nobunqolobi bunyanzelisa abantu ukuba badlule kwizinto ezazibonakala ngathi ziyisithintelo ukukhwela inqwelomoya, utshintsho kwiinkqubo zokuhamba rhoqo, imithetho kunye neeshedyuli zokuhamba ngenqwelomoya kwakuthetha ukuba uhambo bekuhlala kunzima kunokuba luyolo. Nje ukuba ubhubhane wenzeke uhambo, xa lwalukho kwaphela, lwaluhlala luphupha. Ukuba siza kulwakha ngokutsha uhambo nokhenketho ngo-2021 kubaluleke kakhulu kunakuqala ukufumana iindlela kungekuphela nje zokuqinisekisa ukhuseleko lwendwendwe kodwa ukomeleza kunye nokuhlaziya amava endwendwe.
Ngenxa yobhubhane izizwe kwihlabathi liphela zihlupheka ngenxa yezoqoqosho olubuthathaka kunye nokudana inkokheli zopolitiko. Kuninzi lwehlabathi, ukudityaniswa kwehlabathi kuyekisiwe kwaye imibutho efana neZizwe eziManyeneyo ayinamsebenzi. Ezi nyaniso zintsha, nangona kunjalo, zibonisa kuphela inxenye yebali. Ngapha koko, ngokwembono yeshishini lokhenketho nakwezokhenketho ezi ziganeko zingaqhelekanga zizinto ezenziwayo: Oko kukuthi zizinto ezenzeka kushishino, kodwa kungenjalo ziphantsi kolawulo lomzi mveliso. Ukuba ishishini lokuhamba nokhenketho liza kwakha kwakhona kwaye liphumelele kwakhona kula maxesha anzima, kufuneka lenze okungaphezulu kokuzibona nje lixhoba lezigqibo zabanye abantu; Kufuneka iphinde izihlolisise ukuze ibone ukuba nayo inokuphucula phi. Oko kuthetha ukuba amaxabiso kufuneka angakhethi cala kwaye yonke imiba yeshishini lokuhamba kufuneka ifumane iindlela zokuphucula amava kunokwenza izithintelo ezingenangqondo okanye ezingekho mthethweni.
Mhlawumbi isoyikiso esikhulu kushishino lokuzonwabisa (kwaye ukuya kuthi ga kwinqanaba elincinci kwishishini lokuhamba kweshishini) yinto yokuba uhambo lwalulahlekelwe yinto elungileyo yothando kunye nobugqi. Ekukhawulezeni kwayo ukusebenza kakuhle kunye nohlalutyo lobungakanani kushishino lokhenketho nokhenketho kusenokwenzeka ukuba lilibale ukuba umhambi ngamnye umele ilizwe kuye kwaye umgangatho kufuneka usoloko ungaphaya kobungakanani.
Ngokukodwa kushishino lokuhamba lokuzonwabisa, oku kusilela kobugqwirha kuthetha ukuba zimbalwa kwaye zimbalwa izizathu zokufuna ukuhamba kunye nokuthatha inxaxheba kumava okhenketho. Umzekelo, ukuba zonke iivenkile ezinkulu ziyafana, okanye ukuba uluhlu olufanayo lukhona kuzo zonke ihotele, kutheni ungahlali ekhaya, ngakumbi emva kobhubhane kunye nenyaniso yokuba ngoku siqhelene nemigaqo yokuphambuka ekuhlaleni? Kutheni le nto umntu angafuna ukuzibeka esichengeni seengozi kunye nobunzima bokuhamba, ukuba abasebenzi bakrwada nabazikhukhumeleyo baphambanisa ubuqili bohambo? Nangona kusekho isidingo sohambo lweshishini lobuqu inyani yokuba umhlaba usindile kwiintlanganiso ze-elektroniki phantse unyaka, oko kuthetha ukuba ishishini lokuhamba kuya kufuneka lisebenze nzima kabini ukubuyisa abathengi.
Nje ukuba ubhubhane uphele kwaye uhambo nokhenketho luqale sonke kufuneka sifumane iindlela zokubeka uthando kunye nobugqi kwakhona kwinxalenye nganye yeshishini lokuhamba nokhenketho. Ukukunceda wenze njalo IiTidbits zoKhenketho inikeza ezi ngcebiso zilandelayo.
-Ungaze ulibale ukuba asinakulokotha sithathe abathengi bethu ngokungakhathali. Undwendwe akufuneki luye eholideyini okanye lutyelele apho siya khona. Xa siqala ukuthatha abantu ngokungakhathali kwaye ekugqibeleni sitshabalalisa eyona asethi yethu inkulu, oko kukuthi igama lethu.
-Gxininisa okwahlukileyo kwindawo ohlala kuyo okanye yintoni ekhethekileyo ngeshishini lakho. Musa ukuzama ukuba zizinto zonke kubo bonke abantu. Mela into ekhethekileyo. Zibuze: Yintoni eyenza indawo ohlala kuyo okanye umtsalane wahluke kwaye wahluke kubantu okhuphisana nabo? Uluntu lwakho okanye ishishini libubhiyozela njani ubuntu balo? Ukuba ubulundwendwe kwindawo ohlala kuyo ubuya kuyikhumbula kwiintsuku ezimbalwa emva kokuba umkile okanye ibiya kuba yindawo enye emephini? Ukuba ulishishini kutheni uzibuze ukuba yintoni eyenza amava omthengi wakho abe akhethekileyo? Umzekelo, musa ukunika amava angaphandle, kodwa uzenzele la mava, yenza iindlela zakho zokuhamba ngendlela ekhethekileyo, okanye uphuhlise into ekhethekileyo malunga neelwandle zakho okanye amava omlambo. Ukuba, kwelinye icala, indawo ohlala kuyo okanye indawo ekuyiwa kuyo kukudala intelekelelo ke vumela intelekelelo ukuba ibaleke kwaye iqhubeke ngokudala amava amatsha.
-Yakha umlingo ngophuhliso lwemveliso. Yenza intengiso encinci kwaye unike ngaphezulu. Soloko ugqithisa kulindelo kwaye ungaze ulibaxe ityala lakho. Ungaze ubeke iliso kwaye unganikezeli! Eyona ndlela intle yokuthengisa yimveliso elungileyo kunye nenkonzo elungileyo. Nika into oyithembisayo ngamaxabiso asengqiqweni. Uluntu luyaqonda ukuba iindawo zonyaka kufuneka zifumane umvuzo wonyaka kwiinyanga ezimbalwa. Amaxabiso aphezulu anokwamkeleka kodwa ukulinganisa akwenzi njalo.
-Ubugcisa buqala ngoncumo kwaye buvela ebantwini abasebenzela uluntu. Ukuba abasebenzi bakho bayabacaphukela abakhenkethi ke umyalezo abawunikayo ngulo utshabalalisa uluvo lokuba babodwa. Kwixesha elidlulileyo abaphathi babenomdla ngakumbi kuhambo lwabo lwe-ego emva koko kumava abakhenkethi. Umqeshwa owahlukileyo, ohlekisayo, okanye owenza abantu bemke beziva bekhethekile kufanelekile amawaka eedola kwintengiso. Wonke umphathi wezokhenketho kunye nehotele ye-GM kufuneka benze wonke umsebenzi kumzi mveliso wakhe ubuncinci kube kanye ngonyaka. Amaxesha amaninzi abaphathi bezokhenketho batyhala ngamandla kumgca ongezantsi kangangokuba balibale ubuntu babasebenzi babo. Yiba neendwendwe kwaye ubone umhlaba ngamehlo abo.
-Hlola iindawo zamava akho okhenketho atshabalalise ukuthakatha. Umzekelo abantu bathotyelwe: kwimigca emide kakhulu, ukunqongophala kwendawo yemozulu, ilanga, umoya, ukubanda njl. Ngaba sinabasebenzi benkonzo ekrwada, abasebenzi abangamameliyo okanye abangakhathaliyo, okanye abanesikhalazo? Ngaba sicinge ngezisombululo eziyiliweyo zokuxinana kweemoto ezindleleni kunye nobunzima kwisikhululo seenqwelomoya, okanye ukunqongophala kokupaka ngokwaneleyo? Nganye kwezi zinto zinomsindo zitshabalalisile ukhenketho lwakudala kwaye kufuneka sijongane nalo ukuba siza kulakha kwakhona ishishini langomso.
Ukuba kunjalo, ezi zezinye zezinto eziguqula amava okuhamba afanelekileyo abe lilize.
-Khangela iindlela onokwenza ngazo umlingo. Sebenza neengcali kwimimandla enje ngokukhanyisa, ukulungisa umhlaba, ukulungelelanisa imibala, ingaphandle kunye nokuhonjiswa kwangaphakathi, ukubonakala kwesitalato kunye nemixholo yesixeko, indawo yokupaka kunye nenkonzo yothutho lwangaphakathi. Izixhobo zokusetyenziswa, ezinje ngeemoto zetroli yaseSan Francisco, zinokuba zizithuthi zobuqili ukuba ziyayiphucula imeko-bume kwaye zongeza into ekhethekileyo kwindawo ethile.
Ukulungelelanisa imithendeleko kunye neminye iminyhadala kunye nokuma kwendawo. Imithendeleko ihlala ihamba kakuhle xa idityanisiwe eluntwini kunokuba yenzeke ngaphandle kwedolophu. Iminyhadala yasezidolophini eyinxalenye yoluhlobo loluntu ayaneli nje ukongeza kumtsalane kodwa ikwanokubaluleka kumashishini endawo kunokuba ibe sisizathu semali yokuvuza eluntwini.
-Yakha umoya okhuselekileyo noqinisekileyo. Kunokubakho umlingo omncinci ukuba abantu bayoyika. Ukudala imeko enjalo abaqeqeshi bezokhuseleko kufuneka babe yinxalenye yocwangciso kwasekuqaleni. Ukhuseleko lwezokhenketho lungaphezulu kokuba namapolisa okanye iingcali zokhuselo ezijinga kwindawo leyo. Ukhuseleko kwezokhenketho ludinga uhlalutyo lwengqondo nolwezentlalo, ukusetyenziswa kwetekhnoloji, umdla kunye neyunifomu eyingqayizivele kunye nokucwangciswa ngononophelo okudibanisa ubuchwephesha kwezokhuseleko kumava omlingo. Uluntu olujolise kubugqwirha luyaqonda ukuba wonke umntu eluntwini uyakuba nenxaxheba ayidlalayo ekwakheni amava ezokhenketho aqinisekileyo kunye nalawo aya kwenza indawo eyodwa neyahlukileyo, ingabi yeyondwendwe kuphela kodwa kwanabo bahlala eluntwini.
-Yiba krwada. Ukuba olunye uluntu lwakha iikhosi zegalufa, ke yakha enye into, cinga ngoluntu lwakho okanye indawo oya kuyo njengelinye ilizwe. Abantu abafuni kutya, ulwimi kunye nezitayile ezifanayo abanazo ekhaya. Thengisa hayi amava kuphela kodwa nememori ngokwahluka kwezinye iindawo.
Eyona holide ikhoyo iya kuba kukoyiswa kweCovid -19 kwaye ukhenketho oluphindaphindiweyo kunokuba ingu-2021 ingangunyaka kungekuphela wethemba kodwa nokuzalwa ngokutsha
yonke ishishini lokhenketho.
Ndinqwenela wonke umntu ixesha leholide elimnandi kunye ne-2021 eyimpumelelo